सुरज सुवेदीको अनलाईन डायरी – "My words are not complete me"
Sharing smile with these two amazing girls who along with other three reached to the Everest Summit few months back and roared 'Women on Top'. It was thrilling moment listening your experience guys. #Nepal #WomenOnTop #PhotoExhibition #Kimff
सुरज सुवेदीको अनलाईन डायरी
"My words are not complete me"
ती अनुपमा, यी अनुपमा – सुरज सुवेदी
अनुपमालाई पहिलोपल्ट भेटेको क्षण सम्झना छ। उनी हामीले बिराटनगरमा आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा आएकी थिइन्। यो २०११ तीरको कुरा हो। उनले त्यो कार्यक्रममा राम्रो प्रभाव छोडेकी थिइन्।
उनी बोल्न अगाडी सर्थिन्, प्रश्न सोध्थिन्, केही काम दिन खोज्यो भने सबैभन्दा पहिला मै गर्छु भन्थिन्। उनको उमेरको मान्छेमा धेरै कमले मात्र त्यति सबैथोक गर्ने हिम्मत गर्दैनन्। उनी सँगै कार्यक्रममा सहभागी भएका धेरै नाम र मान्छेहरू कहाँकहाँ पुगे मलाई थाहा छैन। तर उनी त्यो कार्यक्रमबाट सुरु भएको सामाजिक क्षेत्रको बाटो हिँडिरहिन्।
त्यसपछि उनी युथ फर ब्लडमा स्वयंसेवक भएर आइन्। हरेक हप्ता हुने सेयरिङ डेमा उनी पहिलोपल्ट आएको संझिन्छु। नर्भस थिइन्। परिचय गर्दा उनका हातका औँलाहरू कामेका थिए। उनको बोलीमा शब्दहरू मिलेर वाक्य भएका पनि थिएनन्।
तर त्यसको केही हप्ताहरूमै उनले ती कमजोरीलाई जितिन्। आफूलाई बलियो बनाउन को को सँग कुरा गर्नुपर्छ र के के गर्नुपर्छ सबै सिकिन्। युवा अभियानमा पहिलोपल्ट जाँदा मलाई पनि त्यस्तै भएको थियो भनेर म उनलाई संझाउँथेँ।
उनी कमजोरीलाई जित्न हतार गर्थिन्। म कमजोरी हतारले जित्नु खोज्नु पनि कमजोरीनै हो भन्थेँ।
उनले युथ फर ब्लडको फोन बोकिन्। रगत चाहिएर आपत् परेका धेरै मानिसहरूले खोजिदिन आग्रह गर्दै गरेका फोनहरू उठाइन्। उनीहरूलाई रगत दिन सक्ने मान्छे को हुन्छ भने धेरै रक्तदाताहरूलाई फोन गरिन्। रगतको व्यवस्थापन गर्दाको खुसी र आनन्दलाई उनले धेरैपल्छ मलाई सुनाएकी छन्। र फोन बोक्ने त्यस्तो काम हो जो युथ फर ब्लडमा लागेका १० मध्ये ३ जनाले मात्र बोक्छु भन्ने हिम्मत गर्थे।
उनी युथ फर ब्लडमा निक्कै सक्रिय भएकै बेलामा म काठमाडौँ आएँ। म यता आएपछि पनि उनीसँग बेलाबेला कुरा हुन्थ्यो। त्यस बेला पनि उनी केही गर्न खोजेको कुराहरू सुनाउँथिन्। उनीसँग कुरा नहुँदा पनि सामाजिक सञ्जालले उनको बारेमा धेरै कुराहरू भन्थे।
उनले युथ फर ब्लडका धेरै कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइन्। ‘कलेज सचेतना कार्यक्रम’ तथा ‘स्वयंसेवक नेतृत्वा तालिम’ जस्ता कार्यक्रमहरूको नेतृत्व गरिन् र सफल पनि पारिन्।
सेयरिङ डे मा बोल्न धकाउने ती अनुपमा पुर्वाअंञ्चलका विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू होस्ट गरेको फोटो हाल्थिन्। उनी एफएममा कार्यक्रम पनि चलाउन थालेकी थिइन्। मलाई उनको प्रगति देखेन खुसी लाग्थ्यो।
अनुपमा मैले चिनेसम्म कमजोरी सहितकी मान्छे हुन्। उनलाई चाँडो रिस उठ्थ्यो। कसैको बानीमा चित्त बुझेन भने प्रतिक्रिया दिइहाल्थिन्। धेरैपल्ट इखा लिएर पनि बसेकी हुन्थिन्। त्यसकैको कारण दुखी हुन्थिन् । त्यसले उनको वरपर हुने मान्छेहरूलाई पनि असर गर्थ्यो।
उनी सामाजिक क्षेत्रमा आएदेखि उनलाई चिनेको तथा उनले ‘दाइ यस्तो पर्‍यो’ भन्दै सुनाउने मान्छे हुन पाएको भएर कतिपय बेला उनलाई सुझाव र सल्लाहरू दिन पाउँथेँ म। गाह्रो भए पनि आफ्ना त्यस्ता कमजोरीहरूलाई जित्ने प्रयत्न गर्न भन्थेँ। हरेक कमजोरीको पराजयपछि नयाँ खाले कमजोरी थपिन्छन् पनि भन्थेँ।
बिचमा म बिराटनगर गएको बेला बिराटनगरको युथ फर ब्लडले गर्ल्स क्रिकेट आयोजना गरेको थियो। त्यसमा उनी सहभागी भइन्। मलाई केटाहरूले उनको टिमको कोच बनाइदिएका थिए। क्रिकेट जान्ने भएर हैन यसो क्रिकेटनै नबुझ्ने केटीहरूलाई सामान्य सिकाउन सक्छ भनेर म छानिएको थिएँ। उनले टिममा क्याप्टेन र विकेटकिपरको भूमिकामा खेलेकी थिइन्। दुई तीन दिनको ट्रेनिङमै उनी अरूभन्दा अब्बल हुँदै गएको देखेँ मैले।
उनी र साथीहरू मिलेर पछि ‘हामी युवा’ नामक समुह खोलेका छन् र युवाहरूको व्यक्तित्व विकासको लागि काम गरिरहेका छन्।
उनले समय भ्याएसम्म धेरैतिर हात हालिन्। करियरको सुरुवातमा त्यस्तो सबैले गर्छन् पनि। त्यो बेलामा भएजति सबैतिर पुग्न मन लाग्छ, अरूले गरेका सबै काम गर्न मनपर्छ। अनुपमा पनि त्यही समय हुँदै आएकी हुन्। तर मैले अनुपमा ती सबै प्रक्रियाहरूमा गुज्रिएर अहिले आफू जाने बाटो पहिल्याउँदै हिँडेको पाएको छु। मिस नेपालमा जान्छु भन्ने सोचेदेखि त्यसको लागि उनले गरेको तयारी देखेरनै मलाई मिस नेपाल केवल देखिने सुन्दरताको प्रतियोगिता मात्र हैन भन्ने विश्वास लागेको छ।
र केहीदिन पहिला मिस नेपालको टप २५ मा छनौट भइसकेकी उनलाई भेटेको थिएँ। धेरै समयमा भएको त्यो भेटमा उनी मलाई निक्कै नौली लागिन्। बोल्ने तरिकाहरू फेरिएछ। पहिला मैले कुनै कुरा संझाउँदा बिचमा बेलाबेला प्रश्न फालिराख्थिन्। मनमा खेलेका कुराहरू सुनाउन अधैर्य भैहाल्थिन्। यसपल्ट धेरै धैर्य भइछन्। निक्कैबेर सुनेर मात्र बोल्न भइछन्।
यी शब्दहरू लेख्दै गर्दा म धेरै अनुपमालाई एकैपल्ट सम्झिरहेको छु। ती सबै अनुपमाहरूमध्ये अगिल्लो अनुच्छेदकी अनुपमा यसपल्टको मिस नेपालमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छिन् भन्ने संझिएर खुसी लागेको छ।
अनुपमाले जित्छिन् कि जित्दिनन् मलाई थाहा छैन। जित्ने प्रक्रिया के हो भन्ने बारेमा म धेरै जानकार पनि छैन तर उनले प्रतियोगिता जित्नु भनेको एउटा डेडिकेटेड, सामाजिक कामको महत्त्व बुझेकी र समाजको लागि साँच्चैनै केही गरौँ भन्ने धारणा भएकी युवतीले जित्नु हो भन्ने कुरा भन्न सक्छु।
र अस्तिको भेटदेखि म उनको त्यो क्षमतामा यति प्रभावित भएँ कि उनी मिस नेपाल भइनन् भने पनि बिराटनगरको लागि भविष्यमा धेरै काम गर्नेछिन् भन्नेमा ठुलो विश्वास पलाएको छ।
प्रतियोगिता जित्न हिँडेकी उनी हार्न पर्‍यो भनेपनि मन जितेर फर्किउन्। अनुपमालाई यात्राको लागि धेरैधेरै शुभकामना।
उनको बारेमा बुझ्न: https://www.youtube.com/watch?v=KYIjMikrkM0 (9:45 min onwards) & https://www.youtube.com/watch?v=Sihmfo_svpY
धेरै कुरा उनको फेसबुक पेजले पनि बोल्छन्: https://www.facebook.com/anupamaofficial99/
केही पुराना फोटोहरू:
April 7, 2018 skyasesh	1 Comment
सुयसा दिदीले गरेको अनलाइन भोटिङको रिजल्ट आयो । हामी नगरकोट जाने भयौ ।
काम गरिरहेको संस्था विकास उद्यमी । गएको साउन तीन गते (१८ जुलाई) यो एक वर्ष पुगेको थियो । त्यो दिन पनि केक काटेर मनाएका थिँयौ । तर एनिभर्सरीमा कतै जाने योजना पहिलादेखिकै थियो नाइट स्टे गर्नेगरी कतै जाने कि एक दिने घुमघाममा रमाउने भन्ने अन्तिम प्रश्न बाँकी थियो ।
त्यसैको लागि गुगल फर्ममा अनलाइन भोटिङ भएको थियो । आफूले भोट हालेको विषयले जितेकोमा खुसी थिँए । तर नगरकोट जाने कुरामा घरायसी कारणले अंकिता र कलेजको कारणले इसा जान नपाएपनि बाँकी सबै जाने भए पछि लाग्यो नाईट स्टेको विपक्षमा कसैको पनि भोट गएनछ ।
नगरकोट जाने भनेपछि मन त्यसै फुरूंग । धेरैपल्ट नगरकोट पुगेर फर्किन थालिसकेको थियो । गुगलमा त्यहाँको बारेमा पढ्नेदेखि लिएर फोटोको पोज सिक्नेसम्म काम गरिसकेको थिँए । फोटोग्राफर सिमोन पनि त जाँदै थियो ।
तब बस् हिँड्नु थियो । शुक्रवार चार बजे हिँड्ने भइयो । Continue reading →
August 6, 2017 skyasesh	Leaveacomment
अफसोच! – सुरज सुवेदी
त कहिले गोलीगाँठो
शरीरका जुन भाग कडा छन्
तिनै धेरै दुख्छन्
यही कुरा बुझ्दैनन् । #SS
April 13, 2017 skyasesh	सुरज सुवेदी, Nepali poem, poem, suraj subedi, Surazz	Leaveacomment
आन्दोलन र डेब्युहरू – सुरज सुवेदी
नाटक आँउदै गरेको कुरा उसले सुनाएन ।
अरूको मुखबाट सुन्दा दु:ख पनि लागेन । बरु मिठो ईर्श्या लाग्यो ।
केहिवर्षअगाडी सुरु हुने भनिएको ‘आन्दोलन’ रोकिएकोमा भने चिन्ता लागेको थियो । आन्दोलनकारीहरू भेटिएका थिएनन् । कथाका पात्रहरू कथामै थन्किएका थिए । बोल्नुपर्ने बोलीहरू सुनिएका थिएनन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समय दौडिरहेको थियो ।
सौरभलाई हतार थिएन । Continue reading →
April 5, 2017 skyasesh	drama, Nepali, suraj subedi	Leaveacomment
अ म्यान रिप्लाईङ बर्थडे विसेज्- सुरज सुवेदी
बर्थडे विस गर्नेहरु सबैलाई गिफ्ट पठाउँदैछु ।
फेसबुक¸ टुईटर¸ ईन्टाग्राम¸ फोन र म्यासेजहरुमा आएका सबै शुभकामनाहरुले खुशी बनाएको छ । मेरो उमेर बढेकोमा खुशी हुँदै प्रगती पनि बढोस् भनिदिएका छन् सबैले । यहाँ भन्दा अरु के चाहियो ? मलाई एक वर्ष बुढो भएकोमा दु: ख छैन ।
‘कति वर्ष पुगिस् त?’ धेरैले यस्तो प्रश्न सोधे यसपाली ।
कसैलाई ‘केटालाई उमेर र केटीलाई तलब नसोध्नु’ त कसैलाई ‘१८ प्लस’ भनिदिँए । हाँस्ने बाहाना।
हाँस्ने बाहाना भएन भने त बाँच्ने बाहाना नै हुन्न नि हैन ?
रमाईला रमाईला विसहरुलाई छानेर यहाँ एकैठाँउ मिसाउनुको गहिरो स्वार्थ पनि त्यहि हो । फेसबुकको टाईमलाईनको भर हुन्न । फेसबुकको मात्र किन कुनै पनि टाईमलाईनको भर हुन्न । माथिबाट पुरिएपछि तलका सामाग्री कहाँ पुग्छन् कहाँ । उमेर जस्तै¸ संझनाहरु जस्तै । Continue reading →
January 17, 2017 skyasesh	सुरज सुवेदी, birthday, suraj subedi	1 Comment
नसकिने भोक, नसकिने भोको घर
थिएटर मलमा भोकको घर हेरेर फर्किँए ।
आफैले अभिनय गरेर फर्किँए, कसैको अभिनय हेरेर फर्किँए वा अभिनय सिकेर फर्किँए यकिन छैन । निस्किएपछि ‘नाटक कस्तो लाग्यो?’ भनेर नाटकका निर्देशक केदार श्रेष्ठले सोध्दा मैले यहि भने, ‘नाटक भर्खर सुरु भयो दाई । अब घर पुगुन्जेलसम्म हेर्दै जान्छु ।’
मेरो नाटक हेर्ने भोक र दाईको प्रतिकृया सुन्ने भोक भेला भएको बेला थियो त्यो।
मलाई यो नाटक हेरेर मनमा खेलेका केहिकुराहरु मनन् गर्नु छ । नाटकका हरेक पात्रहरुसँग थिएटरबाट निस्किएपछि पनि नजिक हुने प्रयत्न गर्नु छ । ति पात्रहरु म सँग किन मिल्छन् भन्ने कुरा सोध्नु छ । तर सोध्ने पो कसलाई हो ?
र नाटकको मुख्य पात्र पुतली (जो मलाई मात्र मुख्य पात्र लागेको हुनसक्छ) लाई धेरैबेर संझिरहनु छ । वर्तमान समयमा त्यो नाटकको पुतली किन यति धेरै सान्दर्विक भएको ?
यसैले हतार गर्दैछु ।
हतार गर्नु पनि भोक लाग्नुको एक लक्षण होला । निर्देशकलाई नाटक गर्ने, कलाकारलाई अभिनय गर्ने र म जस्ता दर्शकलाई हेर्ने भोक नलागेको भए संभबत यो नाटक तयार थिएन। गोठालेको पालाको भोक अहिलेसम्म कायम नभएको भए पनि संभबत यो नाटक मंचन हुनुको अर्थ थिएन । ब्रोसरले सहि भन्छ, ‘समयान्तरसँगै मानिसका सपनाका तह बढेपनि स्वरुप उहि रहँदा . . . नाटक हरेक समयको प्रतिनिधी हुनसक्छ ।’ प्रतिनिधी नै भन्ने शव्दसँग म पूर्णत सहमत छुईन तर यति हो निन्द्रा बिच्किईरहँदासम्म सुन्दर सपनाहरु टुंगिन पाँउदैनन् । सपनाहरु नटुंगिएसम्म निन्द्रा पुरा हुन पाँउदैन । झस्काईरहन्छ त्यस्तो विवशताले नाटककी सरितालाई जस्तै । किनकिन मलाई त्यो सरिताको दन्त्यकथामा रुमलिएको जीबन र मेरो हरेकदिनको पैदल हिँडाई उस्तै उस्तै लाग्यो । Continue reading →
January 1, 2017 skyasesh	काठमाण्डौ, थिएटर मल, नाटक, नेपाल, नेपाली समिक्षा, समिक्षा, सुरज सुवेदी, Bhok ko Ghar, drama, Nepali drama, NepaliTheatre, suraj subedi, Surazz, Theatre Mall	Leaveacomment
संग्राहलयमा ‘मिल्क टी’ को न्यारेसन – सुरज सुवेदी
दुईवटा झ्यालबाट छिरेको उज्यालोमा देखिने एउटा फ्ल्याट । क्लासिकल लुकमा सजाईएको सेट र दर्शकपट्टिको भित्तामा झुण्ड्याईएका दुईवटा पेन्टिङहरु । मण्डला थिएटरमा नाटक सुरु हुँदा पहिलोपटक देखिने दृश्य र संगीतले कुनै प्राचिन समयको झलक दिन्छ । तर यो अहिले भईरहेको समयको कथा हो ।
कथामा पार्शल आँउछ । प्रमुख पात्र राधा उक्त पार्शलको लागी आवश्यक पर्ने परिचयपत्र खोज्न समय लगाउँछिन् । दुईटा अर्थ छ, एक उसलाई कसैले दिएको परिचयपत्रमा विश्वास लाग्न छोडेको छ र दुई तमाम पुरुष पात्रसँग उनलाई केहि भन्नु छ, त्यसैले उनि आउने हरेक पुरुषलाई केहिसमय रोक्दैछिन् ।
भित्ताका पेन्टिङमा महिलाले पहाड थामिरहेको देखिन्छ । ति पहाडहरु हरिया छन् तर अलि गहिरिएर हेर्दा तिनीहरुको फेदलेनै महिलाको हात तानिरहेको हो कि जस्तो लाग्छ । हरिया पहाड र खैरा जरा । प्रकृतिको यो अनौठो संयोग केवल बोटबिरुवालाई सुहाँउछ, मान्छेलाई त बोटविरुवा हुनै आँउदैन । Continue reading →
December 4, 2016 skyasesh	काठमाण्डौ, नाटक, नेपाल, नेपाली, नेपाली समिक्षा, समिक्षा, सुरज सुवेदी, drama, Mandala, Mandala Theatre, Milk Tea, Nepali drama, nepalitheater, NepaliTheatre, Reviews, suraj subedi, Surazz	Leaveacomment